5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 20/01/2021)
Save A Train na-eme gị 5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium ka nleta! E nwere ihe na Belgium karịa nnọọ biya. Chọpụta quirky castles, nzuzo ọkpụkpụ, na obodo ndị ma gị Rada ma kpamkpam kwesịrị! Belgium nwere ọtụtụ zoro bara nnukwu uru ị ga-adịghị anya na-ada na ịhụnanya na-.
Mechelen bụ ọkara n'etiti Brussels na Antwerp. The obodo center e ji gabled Renaissance ụlọ, nlezianya weghachiri eweghachi, mgbe n'ọma ahịa na-adịkwaghị na Gothic katidral na otu akụkụ na ụlọ ezumezu obodo, nwekwara Gothic, na ndị ọzọ. Mechelen a na-eleghara anya na ihu ọma nke ndị ọzọ ewu ewu na ebe. Otú ọ dị, ọkọ n'okpuru elu ma na ị ga-adịghị anya na-achọpụta a mara mma Belgium mmezi ihe karịrị uru oge gị mgbe na mba na maa otu nke Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium ka nleta!
Brussels ka Mechlen Ụgbọ oloko
Antwerp ka Mechlen Ụgbọ oloko
Ghent ka Mechlen Ụgbọ oloko
Liège ka Mechlen Ụgbọ oloko
The obere obodo na ike (na sugar!) Ọ bụrụ na ị mgbe ụtọ a sugar cube n'akụkụ gị ọhụrụ kọfị ma ọ bụ iko tii, mgbe o doro anya na ọ ga-eleghị anya e esichara na obere obodo nke Tienen. Nke a obere obodo bụ adịghị anya site Leuven. Wepu uzo amia na obi Flemish Brabant na Flanders, a mmezi bụ otu ugboro na obi Roman ceramik na iko Ndinam! Nke a bụ otu n'ime isi ihe mere na ọ bụ otu n'ime Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium ileta!
Tienen nwere ọtụtụ ihe karịa anya. Lee anya gabiga doro anya isi ụka. Sook elu ambiance na ịlele obodo nri (ọdịnala Flemish nri na-agụnye ọtụtụ anụ-arọ staples dị ka stews, meatballs, na mọsel).
Ihe doro anya na-egosi na obodo ahụ bụ Sint Germanuskerk, a ịrịba ama Romanesque ụka topped site a UNESCO belfry na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị azụ ka narị afọ nke 13. N'oge July na August, carillon concerts-ebe ọ bụla Wednesday. Tinye ya na gị kalenda!
Liège ka Tienen Ụgbọ oloko
Brussels ka Tienen Ụgbọ oloko
Antwerp ka Tienen Ụgbọ oloko
Ụgbọ oloko na-Namur
Ị nwere ike mfe enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè na-enyemaka nke Save A Train na Brussels. Mgbe ahụ, ọ bụ a ngwa ngwa iri atọ nkeji ride ndịda obodo nke Hoeilaart. Ebe ị ga-ámá na Sonian Forest na otu onye nke 5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium ileta!
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ịgagharị agwa, ọ bụ zuru okè isi, mpụga nke ọrụ n'aka Brussels. Gaa Leta Forest Museum Jan van Ruusbroec, ịmụta banyere ọhịa tupu ịgagharị otu n'ime ọtụtụ ụzọ ụkwụ.
Hoeilaart nwere ọzọ zoro ezo mkpuru; ọ bụ n'ụlọ ka nke kacha mma mkpụrụ vaịn na Belgium. Hoeilaart e ugboro maara dị ka iko obodo n'ihi na nke niile nke grape jupụtara greenhouses. Mgbe mmepụta ebelatawo karịrị afọ, Hoeilaart mkpụrụ vaịn ka na-na ịna gburugburu mba, na ha na-ere si otú ahụ ngwa ngwa, ọ kasị mma na-aga ogologo isi iyi na-aka gị na ha.
Lille ka Hoeilaart Ụgbọ oloko
Brusseles ka Hoeilaart Ụgbọ oloko
Antwerp ka Hoeilaart Ụgbọ oloko
Liège ka Hoeilaart Ụgbọ oloko
4. Maa mma Zoro Ezo Gem – Tongeren, Limburg
gaa Leta ochie obodo Belgium. A aha otutu e nyere ruru ya ọgaranya France Roman akụkọ ihe mere eme. Ịrịba ama nke a akụkọ ihe mere eme na-anya nile na obodo, ma ebe kacha mma bido bụ Gallo Roman Museum nke nwere mmeri. Ozugbo ị mikpuru onwe gị na mmekọrịta ngosi, see n'okporo ámá na otu n'ime ndị na-eduzi onwe ya ije njegharị ịchọpụta akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na Tongeren.
Nke a na obere obodo nwere ihe abụọ UNESCO depụtara ncheta, na belfry nke nnukwu ụlọ ụka Senti nke Anyị Lady na beguinage. Mụta banyere ndụ nke Beguines, inyom bụ ndị raara onwe ha nye chọọchị, na Beguinage Museum Beghina. Ke Sunday, Tongeren ụsụụ ndị agha Beneluxs nnukwu ochie ahịa, na ihe karịrị 350 ndị na-ere ahịa na-ere ihe mgbe ochie site n'akụkọ ihe mere eme niile.
Ọ bụrụ na ị ka na-nwere gị rijuru afọ nke gara aga 5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium, akwụsị dị nso Alden Beisen Castle mkpagharị site na ọmarịcha iwu ubi.
Maastricht ka Tongeren Ụgbọ oloko
Liège ka Tongeren Ụgbọ oloko
Aachen ka Tongeren Ụgbọ oloko
Bonn na Tongeren Ụgbọ oloko
5. Maa mma Zoro Ezo Gem – Binche, Hainaut
The obodo nke Binche ke Belgium n'ógbè Hainaut anya dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na obere obodo na Wallonia. Ọ bụ a na-ero ụra ụdị ebe naanị otu onye na isi njegharị mma, ihe ndị magburu onwe International Museum nke ejị na Masks, ma ọ bụ mum.
Na ụbọchị eduga Ash Wednesday, Binche bụ ihe ọ bụla ma na-ero ụra. The ejị nke Binche bụ ihe pụrụ iche na ụwa na-emekwa a zoro ezo mkpuru! The ememe na-agụnye ọtụtụ ekike, music, ịgba egwú, na a ngosi bit nke mmanya na fun! Ọ bụ otú ahụ pụrụ iche na eziokwu, ọ na-dere dị ka ihe na-na Oral na Intangible Heritage nke Humanity site UNESCO.
The omenala na ememe pụrụ iyi kpamkpam na-apụghị ịkọwa n'èzí, luckily mum enwere ịkọwa ihe niile doro anya zuru ezu. Ịga ejị nke Binche bụ a n'ezie agaghị echefu.
Brussels ka Binche Ụgbọ oloko
Antwerp ka Binche Ụgbọ oloko
Lille ka Binche Ụgbọ oloko
Reims ka Binche Ụgbọ oloko
Njikere na-achọpụta 5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium? Mgbe ahụ isi na n'elu Save A Train ugbu a. Book na nkeji na-enweghị zoro ezo na-akwụ ụgwọ, dị nnọọ zoro bara nnukwu uru!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Kasị Maa mma Zoro Ezo bara nnukwu uru Na Belgium” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-belgium%2F – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#secretbelgium #njegharị #travelhiddengems europetrains europetravel hiddengem Train Travel njegharị